NEW ZEALAND HALF SHELL MUSSEL 907G (GREEN)
ကော်ဖီစေ့ | ကော်ဖီစစ်သောပစ္စည်း | ကော်ဖီကြမ်း | အသင့်သောက်ကော်ဖီ | အသင့်ရောစပ်ထားသောကော်ဖီ
လူကြီးသောက်သောနို့မှုန့် | ချောကလက် | ကိုကိုး | မုယော | အထူးဖော်စပ်ထားသော ဖျော်ရည် | ကျန်းမာရေးအတွက် ဖျော်ရည်များ | တခြား
တခြားနို့များ | ပဲနို့ | ပေါင်းခံပြီးသောနို့
ကာဗွန်နိတ်အချိုရည် | အားကစားအတွက် အချိုရည် | လက်ဖက်ရည်
အစားအစာပြင်ဆင်ရာတွင်သုံးသည့် ပစ္စည်းများ | ဟင်းအနှစ်များ | ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်နှင့်အရသာမှုန့် | အသုပ်သုပ်ရန်ဆော့များ | ရှာလကာရည်နှင့်ဟင်းချက်ဝိုင်​ | ဆား | ငပိနှင့်ငံပြာရည် | ပဲငံပြာရည် | ခရုဆီ | ပါစတာဆော့စ် | အရံများ | ဝါစာဘီ
ကြက်ဥချောင်း | ၀က်ပေါင်ခြောက် | တခြား
သစ်သီးယို | ထောပတ်နှင့်ယိုများ | ပျားရည်
ပြောင်းဖူးမုန့်ဆန်း | အသင့်စားအာဟာရပြည့်အစားအစာ | နံနက်စာစားဖွယ် | အုတ်ဂျုံ
မြေပဲ | သီဟိုဠ်စေ့ | နေကြာစေ့ | အခြား‌အစေ့များ
ဒိန်ချဥ် | ချိစ် | ထောပတ် | ခရင်(မ်) | ကြက်ဥ ဘဲဥ ငုံးဥ
ပြုပြင်ထားသောဟင်းသီးဟင်းရွက် | ပြုပြင်ထားသောအသား
ဂုံး၊ ကမာနှင့်ရေဘဝဲ | ငါး | ပုဇွန်နှင့်ဂဏန်း
သိုးသား | ဝက်သား | နွားကလေးအသား | အမဲသား | ဘဲသား
ဝက်သား | အမဲသား | ကြက်သား | ဘဲသား
ပန်းသီးနှင့်အရည်ရွှမ်းသီးများ | ငှက်ပျောသီး | သံပရာမျိုးဝင်အသီး | စပျစ်သီး | ဖရဲသီး | အသီးမာများ | ရာသီစာအသီး | တခြားသစ်သီးများ
ဝိုင်နီ | နှင်းဆီဝိုင် | စပါကလင်ဝိုင် | ဝိုင်ဖြူ
လက်သန့်ဆေးရည် | လက်ဆေးဆပ်ပြာ
မှန်သန့်စင်ပစ္စည်း | ရေချိုးခန်းနှင့်အိမ်သာသုံးသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်း | ပန်းကန်ဆေးဆပ်ပြာ | ကြမ်းခင်းသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်း | မီးဖိုချောင်သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်း | စွယ်စုံသုံးသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်း
အစားအစာပြင်ဆင်မှုသုံးပစ္စည်းများ | မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်း | ချက်ပြုတ်ရေးကိရိယာ | ဝန်ဆောင်မှုပစ္စည်း | မုန့်ဖုတ်ပစ္စည်း
လျှပ်စစ်ဒယ်အိုး | ထမင်းပေါင်းအိုး
ပင်မစာမျက်နှာ > ပင်လယ်စာ > အေးခဲထားသောပင်လယ်စာ > ဂုံး၊ ကမာနှင့်ရေဘဝဲ > NEW ZEALAND HALF SHELL MUSSEL 907G (GREEN)
ကုန်ပစ္စည်း ကုဒ်: #141803110002
ပစ္စည်း အမှတ်တံဆိပ်: PREMIUM IMOPORTED SEAFOOD
ထုတ်လုပ်ရာ နိုင်ငံ: NEW ZEALAND
သိမ်းဆည်းရမည့် အပူချိန်: Frozen
Description: High quality rope cultured mussels in clean coast area in New Zealand to ensures sand and grit free. The flesh is full and plump, and richly flavoured. The flesh of the female isasoft-blush apricot colour, and the maleapale creamy colour. There is no taste difference between the male and female. .Application: They are well suited to many types of preparations including, sauté, frying, baking, steaming, broiling, stewing and grilling.
CHILEAN WHOLE MUSSEL 1KG (BLUE)
PREMIUM IMOPORTED SEAFOOD
FROZEN SQUID WHOLE CLEANED 2" UP
FROZEN SQUID WHOLE CLEANED 4
FROZEN SQUID TENTACLES
FROZEN CLAM BIG WHOLE CLEANED 20/25
FROZEN SQUID TUBE 2" UP
FRESH CUTTLEFISH WHOLE CLEANED 500G UP